Kandida ho filoham-pirenena : 19 hatramin’ny omaly -
AccueilSongandinaKandida ho filoham-pirenena : 19 hatramin’ny omaly
Kandida ho filoham-pirenena : 19 hatramin’ny omaly
Nihazakazahana ny fanaterana antontan-taratasy firotsahana hofidiana ny faran’ ny herinandro lasa teo teny amin’ny HCC, na ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana, niisa telo izy ireo dia Bezaza Marie Eliana Pascaline Manasy avy amin’ ny Parti Social-Démocrate de Madagascar (PSD), Ravalomanana Marc avy amin’ ny TIAKO I MADAGASIKARA (TIM) ary i Imbeh Serge Jovial avy amin’ ny Antoky ny FIvoaran’ny MAlagasy (AFIMA). Laharana faha-14 amin’ ny filaharan’ireo nanatitra antontan-taratasy firotsahana hofidiana no misy an-dRajaonarimampianina Rakotoarimanana Hery Martial avy amin’ ny Hery Vaovao ho an’i Madagasikara (HVM). Ankoatra ireo izay efa nanatanteraka fihetsiketsehana sy nanambara ny fikasany hirotsaka hofidiana, dia mbola nisy ihany koa ireo kandida tonga nanontany teny amin’ny HCC. Telo andro alohan’ ny hikatonan’ny fanaterana antontan-taratasy filatsahan-kofidiana eny amin’ny HCC, 19 ireo kandida hatreto.
Nandritra ny fanateran’ireo kandida ny antotan-taratasiny ny sabotsy lasa teo, dia nisy ireo izay nampiseho fihetsika hafa kely. Teo ireo izay nitondra sarety, ary nampiditra ny gisa, ny akoho tao amin’ ny efitranon’ny HCC. Ankoatra izay dia mbola nisy ihany ireo kandida nandika ny fitsipika napetraky ny HCC, satria dia mbola nitaona andian-olona ho eny Ambohidahy. Raha oharina amin’ny taona 2013 kosa ny isan’ ireo izay nanatitra antotan-taratasy ho an’ny fifidianana 2018, dia mety hihena izany. Ho an’ny fifidianana 2013 mantsy dia nahatratra 49 ny isan’ireo kandida nanatitra antotan-taratasy, ary ho an’ny fifidianana ho avy dia 19 izany telo andro tsy hikatonan’ny fe-potoana voafaritra.